Falanqaynta Miisaanka Maansada – Garanuug
Home / File / Falanqaynta Miisaanka Maansada
admin January 17, 2017	Leave a comment 2,440 Views
Kun sagaal-boqol lixiyo-toddobaatankii waxaa lagu tilmaami karaa sanadkii laga niib keenay dhawr faa’iidooyin oo ku ladhnaa qorista af-Soomaaliga. Ka sokow in uu qeexay shaniyo-toban kun oo erey, waxaa sanadkaas soo baxay qaamuuskii ugu horreeyay ee sida cilmiyaysan u faaqiday arrinta uu qorahiisu, buuni Yaasiin Cismaan Keenadiid, ku tilmaamay “xasilid la’aanta af-Soomaaliga,” taas oo laga gudbi karo marka ay Soomaalidu “in badan wax qorto.” Waxaa intaas dheer daahfurkii miisaanka maansada Soomaaliyeed, oo sida uu sheegay buuni Andrzejewski [Anjeyafiski] aan “shaki ku jirin” in ay suurtagashay ka dib qoristii af-Soomaaliga ee 1972 (1982). Curiskani waxa uu falanqaynayaa midhaha iyo sooyaalka daahfurkaas.
Idiris Maxamed Cali
17 Bilkow 2017
af-soomaali gaarriye maanso miisaan Soomaali suugaan	2017-01-17
Tags af-soomaali gaarriye maanso miisaan Soomaali suugaan
Previous Bayoolojiga Dugsiga Sare 1: Cutubka 8 Carrada iyo Daryeeliddeeda
Next Indhadeeq Ku Aaway?
Download0 Stock∞ File Size Create DateMarch 27, 2017 Download Aan halkaygii kasii wado taxanihii ku ...
Download0 Stock∞ File Size Create DateMarch 20, 2017 Download Sirta Qoraalka: Masuuliyadda Qoraaga Soomaaliyeed Qoraagu ...